နေ့: အောက်တိုဘာလ 8 2019
Karamursel Kocaeli, Gölcükနှင့်လမ်း Salim လမ်းDervişoğluဆဲလ်မှBaşiskeleခရိုင်နဲ့ D-100 အခြားရွေးချယ်စရာမှဦးဆောင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးပြုပေါ်တွင်တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့်အသွားအလာကိုပိုအရည်စေရန် pauses ။ ခရီးသည်များ၏ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]
သူကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏စကားသံကိုနားထောင်နှင့်အနှေး, ကျောင်းသားများကြောင်းနှစ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်များစေရန်ဆက်လက်တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor ၏တောင်းဆိုချက်များကိုနားထောင်တယ်။ နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကျောင်းသားန်ဆောင်မှုများစွာကိုဒေသများအတွက်စီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုပေးသောမိမိတို့၏ရေဥပဒေကြမ်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့ "ကျောင်းသား-ဖော်ရွေမြို့တော်" ဆောင်ပုဒ် [ပို ... ]
မြေအောက်အလုပ်ရုံများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ပြည်တွင်းနည်းပညာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ယူပြီးမှမှ IMM ကသူ့ယူနစ် "ရထား" ။ အမျိုးမျိုးသောတက္ကသိုလ်များ "ရထားစနစ်များ" မှပညာရှင်များ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) ရထားစနစ်ဦးစီးဌာန, တစ်ဦးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့သည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏အဖွင့်မိန့်ခွန်း [ပို ... ]
42 ကျောင်းသားများကိုအတွက်လမ်းရထားများကပူးတွဲဖွဲ့စည်းပုဂ္ဂလိကလူမှုရေးတာဝန်စီမံကိန်း၏Eskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခေတ်ပြိုင်ကျောင်းဆောင်ပုဒ်စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပါနှင့်အတူ '' စာဖတ်ခြင်းဟာခေတ်ပြိုင်အရေးယူမှုဖြစ်ပါတယ် '' ။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လူများ၏စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထမှထည့်သွင်းဖို့ထိုကဲ့သို့သောစီမံကိန်းတစ်ခု [ပို ... ]
ယင်းမြို့တော်ဝန် Mehmet Zeybek ရွေးကောက်ပွဲကတိတော်များများတွင်အလုပ်လုပ်သောသူတစ်စုံတစ်ဦးထံမှ AFRAY အစပျိုးခြင်းနှင့်စီမံကိန်းများအတွက်အပြုသဘောရလာဒ်များကိုပေး၏။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Zeybek "ဟုအဆိုပါစီမံကိန်းအားတင်ဒါ afray အောက်တိုဘာလ 22 အပေါ်ကျင်းပလိမ့်မည်, အာရုံစူးစိုက်ရန်ဘာသာရပ်အပေါ်တစ်ဦးကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဤသူကားငါ၏နိုင်ငံသားများနှင့်အတူမျှဝေ၏ဝမ်းမြောက်ခါနီး [ပို ... ]
Antalya တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Muhittin အင်းဆက်ပိုး, Antalya ဝိသေသလက္ခဏာတစ်မြို့အောင်၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆက်လက်, စနစ်တကျစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤအခြေအနေတွင်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအလုပ်အတွက်လက်ရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကိုတစ်ခုလုံးကိုခရိုင် 19 ကိုဖုံးလွှမ်းလာတယ်။ ၏မြို့တော်ဝန် [ပို ... ]
တကယ်တော့ ... နီးကပ်စွာဒီချည်ကိုလိုက်နာသောသူတို့အားအံ့သြစရာမရှိပါ။ Oden စောင့်ရှောက်မှုကျနော်တို့မနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်နုရလဒ်များကိုမျှော်လင့်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏ဖျက်သိမ်းခြင်းစဉ်းစားသည်။ TCDD ဧပြီလ32018 ရက်ပေါင်း Bursa-Osman မြန်ရထားစီမံကိန်း: အဆိုပါအချက်ကြောင့်နုဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
CHP Karabükပြည်နယ်ကိုသမ္မတအဗ္ဗဒူလာ Cakir, ရထားKarabükအတွက်နည်းပညာ၏ Institute ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကပြောသည်။ ပြည်နယ်ကိုသမ္မတ Cakir, ရထားပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာအင်စတီကျု၏မြို့ကြောင်းအများကြီးအကျိုးစီးပွားဟုပြောသည်။ Karabükနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်များ၏ဂုဏ်သိက္ခာများတူရကီရဲ့သံနှင့်သံမဏိတောင်းဆိုချက်များကိုကမ္ဘာ့ [ပို ... ]
ဤတွင်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရောက်ရှိ! .. နယူးအဝေးပြေးခွန်ကောက်, တံတားနှင့် YHT အခကြေးငွေများဖြစ်ကြသည်။ လျှပ်စစ်မီး, သဘာဝဓာတ်ငွေ့ခွမရနိုငျတဲ့သူနိုင်ငံသားတွေ၏ထိတ်လန့်ကျော်ထ; အချိန်ကိုအားဖြင့်စာပို့ခတုန်လှုပ်သောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်တံတားဖြတ်သန်းခကို၎င်း, YHT ဆင်ခြေဖုံးရထားလက်မှတ်။ အဝေးပြေး, ရထားလမ်း [ပို ... ]
6 နှစ်ပေါင်းဖို့ကြော်ငြာအာကာသငှားရမ်းအတွက်ဘတ်စ်ကားများနှင့်လမ်းရထားမော်တော်ယာဉ်များအားဖြင့်ရထားလမ်း catenary ထမ်းဘိုးနှင့် turnstiles လမ်းကြောင်းအတွက် Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ဆုများအတွက်တင်ဒါ Created ။ Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက် catenary ထမ်းဘိုးနှင့်ရထားလမ်းလမ်းကြောင်းများအားဖြင့် [ပို ... ]
Artova, Bekdiğin, Suluova, Turhal နှင့်Yeşilyurt Stations Panel အမျိုးအစားပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ဆက်စပ်သောမီးရထားသတင်းများနှင့်အခြားသတင်းများRayHaber 25.01.2019 တင်ဒါစာစောင် 25 / 01 / 2019 ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်တွင်၊ 25.01.2019 နေ့ရက်မဆို [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်လမ်း Duzce မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာပြင်ဆင်ထားရန်စတင်နေစီမံကိန်းကိုဖျက်ပစ် Faruk, concise အသစ်သောစီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရေးတို့အတွက်ခလုတ်ကိုဖိ။ ပထမဦးဆုံးအသစ်အလမ်းရထားစီမံကိန်းအားဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရဖို့သံလမ်းပေါ်တွင်သုံးလမ်းသွားလမ်းအောက်မှာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီ [ပို ... ]
အထူးသဖြင့်အပါအဝင် Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Erciyes ဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစင်တာ, Kayseri ၏သမိုင်းနှင့်သဘာတန်ဖိုးများကိုမြှင့်တင်နေဆဲဖြစ်သည်။ မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Erciyes မှာ Mamdouh Büyükkılıç'ınယူကရိနျးခရီးသွားဧည့်နှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ယူကရိနျးခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အတူမြို့တော်မြူနီစီပယ်ရဲ့အလုပ် [ပို ... ]
ဆောင်ပုဒ်7အောက်မှာဖွဲ့စည်း Konya သိပ္ပံစင်တာကိုယခုနှစ် "ဘယ်လိုကြောင့်အလုပ်လုပ်ပုံ" ။ Konya သိပ္ပံပွဲတော်မှာတစ်ရာ့ငါးဆယ်တထောင်ကလူအားဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ TUBITAK အားဖြင့်ပြန်တမ်း Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Konya သိပ္ပံအတွက်တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးသိပ္ပံစင်တာထောက်ခံ [ပို ... ]
IMM '' ဘာသာပြန်ချက်လက္ခဏာတွေ '' လျှောက်လွှာ၏ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), မြို့ကိုလာမယ့်ခရီးသွားဧည့်များ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များအားကူညီအားအသစ်စီမံကိန်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်များ၏အထူးသဖြင့်အမြင့်ဆုံးပြင်းအားသမိုင်းဝင်ကျွန်းဆွယ်တို့သည် လာ. န်းကျင် [ပို ... ]
ယာဉ်မောင်းဆက်စပ်စမ်းသပ်၏နောက်ဆုံးအဆင့်ကြိုတင်သတိပေး "ကို Safe ယာဉ်မောင်းများနှင့်ပေးပို့စနစ်များစနစ်များ" ပေးခြင်း IETT ။ စနစ်နှင့် တွဲဖက်. နှင့်ချွတ်-သွေးဆောင်မတော်တဆမှုချိုးဖောက်မှုများတားဆီးဖို့အသုံးပြုခံရဖို့လမ်းကြောင်းကနေ Metrobus လမ်းကြောင်း။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီထံမှ [ပို ... ]